स्वागत छ! - येशू ख्रीष्ट को प्रकाश
बाइबलको बाँकी भाग जस्तै, प्रकाश धेरै आध्यात्मिक अन्तरदृष्टि भएको आध्यात्मिक पुस्तक हो। यसलाई शाब्दिक रूपमा व्याख्या गर्ने उद्देश्य कहिल्यै थिएन। त्यसैले यस पुस्तकमा भएका सबै कुराले "आध्यात्मिक कुराहरूलाई आध्यात्मिकसँग तुलना गरेर" अर्थ प्रदान गर्दछ।
"हामी कुन कुराहरु पनि बोल्छौं, शब्दहरुमा होइन जुन मानिसको बुद्धिले सिकाउँछ, तर जुन पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ; आध्यात्मिक कुराहरु आध्यात्मिक संग तुलना। तर प्राकृतिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैनन्: किनकि ती उहाँहरुका लागी मूर्खता हुन्: न त उनीहरु उनीहरुलाई जान्न सक्छन्, किनकि उनीहरु आध्यात्मिक रुपमा विवेकी छन्। " ~ १ कोरिन्थी २: १३-१४
प्रकाश ईस्वी सन् 90 ० को आसपास लेखिएको थियो, र यो बाइबल को अन्तिम पुस्तक थियो कि लेखिएको थियो। यो एक भविष्यसूचक र आध्यात्मिक पुस्तक हो, जो सीधै येशू ख्रीष्ट बाट प्राप्त भएको हो, जोनलाई पहिलो पटक दिइएको थियो जब उनी पेटमोस टापुमा थिए (जहाँ उनी रोमबाट सतावटको बेला निर्वासित भए।)
यो प्रतीकात्मक इमेजरी बाट भरिएको किताब हो, कि मात्र प्रतीक को अर्थ को अध्ययन बाट बुझ्न सकिन्छ, बाइबिल को बाकी को एक सावधान अध्ययन को माध्यम बाट। फलस्वरूप, यस अध्ययनले बृहत रूपले प्रकाश को अर्थ को व्याख्या गर्न को लागी बाकी शास्त्र को सन्दर्भ गर्दछ।
यस अध्ययन को लेखहरु नेभिगेट गर्न को लागी एक तरिका हो:
प्रकाश को एक रोडमैप को माध्यम बाट
वा तपाईले साइटको मुख्य मेनुमा रहेको नेभिगेसनल लिङ्कहरू वा दायाँ वा तलको लिङ्कहरू मार्फत नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ।
र यहाँ अर्को अध्याय द्वारा नेभिगेसनल सारांश छ:
प्रेरित जोन Patmos टापु मा सतावट भोग्दै छन्। त्यहाँ येशूले सातवटा चर्चहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सात सुनको मैनबत्ती को बिचमा हुनुहुने गरी प्रकट गर्नुभयो। र उहाँको पनि आफ्नो दाहिने हातमा सात ताराहरु छन् जो सात चर्चहरुमा परी/दूतहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। जॉन यी सात स्वर्गदूत/दूतहरु लाई प्रकाश सन्देश पठाउन को लागी निर्देशित छ।
येशूले व्यक्तिगत सन्देशहरु प्रत्येक चर्च को आवश्यकताहरु को लागी विशिष्ट मा दिनुहुन्छ: एफिसस, स्मिर्ना, Pergamos, र Thyatira। "एफिसस तिमीले आफ्नो पहिलो माया छोड्यौ। पश्चाताप गर्नुहोस् वा म मैनबत्ती हटाउनेछु। ” "स्मिर्ना उत्पीडनको बिरूद्ध मृत्यु सम्म सत्य रहन्छन्।" "Pergamos मलाई थाहा छ जहाँ शैतानको सीट स्थापित भएको छ।" "Thyatira तपाइँ ईजेबेल लाई तपाइँलाई प्रभावित गर्न को लागी अनुमति दिइरहनुभएको छ।"
सार्डिस, फिलाडेल्फिया, र लाओडिसिया: येशू प्रत्येक चर्च को आवश्यकताहरु को लागी विशिष्ट सन्देशहरु दिन जारी छ। "सार्डिसले बाँकी रहेको कुरालाई बलियो बनाउँछ।" "फिलाडेल्फिया तपाईसंग थोरै शक्ति छ।" "Laodicea तपाईं न्यानो हुनुहुन्छ।"
जबकि अझै पनी पूजा को भावना मा, जोन पाउनुहुन्छ आत्मा मा एक स्वर्गीय पूजा सेवा मा पकडिएको छ जहाँ चार जीवित प्राणीहरु पूजा को नेतृत्व गर्दै छन्। यसबाहेक त्यहाँ चौबीस एल्डरहरु सबै सिंहासन को चारैतिर परिक्रमा छन्, र मानिसहरु को एक संख्या हो कि गन्न सकिदैन, सबै भगवान को पूजा गर्दै छन्।
परमेश्वरको थुमा, येशू ख्रीष्ट, सिंहासनको बीचमा देख्नुभएको छ। र परमेश्वरको दाहिने हातमा एउटा किताब छ कि सात छापहरु संग छापिएको छ। यसबाहेक त्यहाँ भगवान को सिंहासन को अगाडि सात बत्तीहरु छन् जो भगवान को सात आत्माहरु को प्रतिनिधित्व गर्दछ। जसरी येशूले यो किताब खोल्नको लागी भगवानको हात बाट किताब लिनुहुन्छ, सबै जना पूजा मा झर्छन्।
जसरी येशूले प्रत्येक छाप खोल्नुहुन्छ, निम्न प्रकट हुन्छ: एक सेतो घोडा सवार, एक रातो घोडा सवार, एक कालो घोडा सवार, र एक हल्का घोडा सवार। अर्को त्यहाँ धेरै सताइएका ईसाईहरु को आवाज बलिदान को वेदी मुनि बाट आउँदैछ। तब जब छैठौं मुहर खोलिएको छ त्यहाँ एक ठूलो भूकम्प छ, र धेरै मानिसहरु थुमाको अनुहार बाट आफूलाई लुकाउने कोशिश गरीरहेका छन्।
त्यहाँ साँचो सन्तहरु को एक महान पूजा सेवा छ। ती मध्ये 144000 सिल छन्। यसबाहेक त्यहाँ अरु को एक ठूलो कम्पनी हो कि बचत गरीएको हो कि नम्बर गर्न सकिदैन। ती सबै भगवान र थुमाको उपस्थितिमा सान्त्वना पाउँछन्।
त्यहाँ एक आधा घण्टा को ठाउँ को लागी स्वर्ग मा मौन छ जबकि सबै संतहरु प्रार्थना मा छन्। नयाँ नियम महा पूजाहारी, येशू ख्रीष्ट को प्रतिनिधित्व गर्ने एक स्वर्गदूत, स्वर्ण वेदी बाट आगो निकाल्छन् र पृथ्वी मा फ्याँक्छन् र त्यहाँ छन्: आवाज, र गर्जन, र बिजुली, र एक भूकम्प। सात स्वर्गदूत/ दूतहरु मध्ये चार जसको तुरही छ, उनीहरुको तुरही बजाउँछन्।
पाँचौं र छैठौं स्वर्गदूत/दूतहरूले आफ्नो तुरही बजाउँछन्। जब पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही सुनाउनुहुन्छ, त्यहाँ एक गिरिएको स्वर्गदूत छ कि अथाह खाडल खोल्छ। जब छैठौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही बजाउँछन्, त्यहाँ चार अन्य स्वर्गदूतहरु युफ्रेटिस नदी बाट छोडिएका छन्, र उनीहरु दुखी र पृथ्वीमा मार्न को लागी बाहिर जान्छन्।
शक्तिशाली प्रकाश स्वर्गदूत, येशू ख्रीष्ट, एक गर्जन संग स्वर्ग बाट ओर्लिन्छन्: र सात गर्जनहरु आफ्नो आवाज बोल्छन्। जोनले गर्जनले के बोलेका छन् भनेर छाप लगाउन भनिएको छ। तर सातौं तुरही स्वर्गदूत को दिन मा, सबै कुराहरु प्रकट गरिनेछ। जोनलाई भनिएको छ कि उसले धेरै मानिसहरु र राष्ट्रहरु र भाषाहरु र राजाहरु को सामु फेरि भविष्यवाणी गर्नु पर्छ।
भगवान को दुई अभिषिक्त साक्षीहरु (वचन र आत्मा), पहिले दु: ख मा आफ्नो गवाही दिनुहोस्। पछि उनीहरु मारिन्छन्, तर पछि पछि उनीहरु फेरि जीवित हुन्छन्। र त्यहाँ एक ठूलो भूकम्प र डर छ जब उनीहरु लाई पुनरुत्थान गरीन्छ मानिसहरु मा खस्ने। तब सातौं तुरही स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही बजाउँछन्, र त्यहाँ एक घोषणा छ कि सबै राज्यहरु परमेश्वर को हुन्। मन्दिर खुल्ला देखिएको छ, भगवान को सन्दूक संग, र त्यहाँ बिजुली, र आवाज, र गर्जन, र एक भूकम्प, र ठूलो असिना थियो।
पहिले एक शुद्ध महिला चर्च को प्रतिनिधित्व देखाइएको छ। अर्को एक रातो अजगर प्रकट हुन्छ कि उसलाई सताइरहेको छ। त्यहाँ एक महान लडाई छ कि स्वर्गीय स्थानहरु मा जान्छ, र रातो अजगर, शैतान को राज्य को प्रतिनिधित्व, आफ्नो परी/दूतहरु संग बाहिर फ्याँकिएको छ।
पहिले जनावर चर्च मा सतावट र भगवान को बिरुद्ध महान निन्दा बोलेको प्रकट भएको छ। र त्यसपछि अर्को जनावर एउटा भेडा जस्तै दुई सीorn संग प्रकट भएको छ तर त्यो ड्रेगन जस्तै बोल्छ। यो भेडा-ड्रैगन जनावर मानिसहरु लाई जनावर को लागी एक छवि बनाउन को लागी, र जनावर र उनको छवि दुवै को पूजा गर्न को लागी आश्वस्त गर्दछ। यो जनावरले सबैलाई जनावर को निशान र संख्या प्राप्त गर्न को लागी कारण बनाउँछ।
हामी फेरि साँचो एक सय ४४ हजार सन्तहरु देख्छौं तिनीहरुको निधारमा स्वर्गीय बुबाको नाम संग। तब अर्को स्वर्गदूतले घोषणा गरे कि बेबिलोन पतन भएको छ। जो कोही जनावर र उसको छवि को पूजा गर्न को लागी भगवान को क्रोध आउनेछ।
सात स्वर्गदूतहरु अब सर्वशक्तिमान् ईश्वरको क्रोध को सात अन्तिम विपत्तिहरु बाट भरिएको बोतल समातेर देखिएका छन्। सबै सन्तहरु आगो संग मिसाइएको गिलास को एक समुद्र मा उभिएको देखिन्छ, जबकि उनीहरु भगवान को पूजा गर्छन्। मन्दिर स्वर्ग मा खुल्ला देखाइएको छ। र सात स्वर्गदूतहरु मन्दिर बाट बाहिर आउँछन् र सात अन्तिम प्लेग को शीशी दिईन्छ। मन्दिर भगवान को महिमा बाट धुवाँले भरिएको छ, र हामीलाई भनिएको छ कि कोहि त्यो मन्दिर मा प्रवेश गर्न सक्दैनन् जब सम्म सात शीशीहरु लाई खन्याइन्छ।
भगवान को क्रोध को सात शीशीहरु मा बाहिर खन्याइएको छ: पृथ्वी, समुद्र, झरनाहरु र पानी को नदीहरु, सूर्य, र त्यसपछि जनावर को सीट मा। अर्को file औं फाइल महान नदी यूफ्रेटिस मा खन्याइएको छ ताकि पूर्वका राजाहरुको बाटो तयार हुन सक्छ। तीन अशुद्ध आत्माहरु को प्रतिनिधित्व गर्ने तीन भ्यागुतो तब भगवान र उहाँको सेना को बिरुद्ध एक युद्ध को लागी तयारी देखीन्छ। It औं अन्तिम शीशी हावामा खन्याइएको हुनाले "यो सकियो" भनिन्छ। तब बेबिलोन उजागर र तीन भागमा विभाजित छ।
बेबिलोन को आध्यात्मिक वेश्या बेवकूफ शहर पूरै उजागर गरीएको छ, पृथ्वीका सबै राजाहरु संग जो इश्कबाज र उनको साथ व्यभिचार।
शक्तिशाली प्रकाशक स्वर्गदूत, येशू ख्रीष्ट, स्वर्गबाट तल आउनुहुन्छ, "ठूलो शक्ति भएको; र पृथ्वी उहाँको महिमाले उज्यालो भयो। ” उहाँ शक्तिशाली रूपमा घोषणा गर्नुहुन्छ: "बेबिलोन पतन भएको छ।" सबैलाई चेतावनी दिइएको छ: "मेरो मानिसहरु बाट बाहिर आउनुहोस्!" तब बेबिलोन पूरै न्याय र नष्ट गरीन्छ।
अब जब बेबिलोन नष्ट भयो, ख्रीष्टको साँचो दुलही अब देखीन्छ, येशू ख्रीष्ट संग उनको विवाह को लागी तयार। येशू ख्रीष्ट आफ्नो सेना संग दृश्य हो र उहाँ राजाहरु को राजा र प्रभुहरुको प्रभु घोषित गरीएको छ। जनावर र झूटा अगमवक्ता नष्ट हुन्छन् र नरकमा फ्याँकिन्छन्। र सबै कपटीहरु लाई एक घृणित पक्षी मन्त्रालय को बलिदान गरीन्छ।
ऐतिहासिक सुसमाचार दिन कहानी retold छ। तर यस पटक त्यहाँ कुनै बेबिलोन, कुनै जनावर, र कुनै झूटा अगमवक्ता छैन। त्यहाँ मात्र शैतान र उसको रातो अजगर भगवान को मानिसहरु को बिरूद्ध लडिरहेको छ। शैतान र उसको अजगर एक श्रृंखला संग बाध्य छन्, त्यसपछि जारी, र त्यसपछि अन्त मा नरक मा डाली। र तब सबै ईश्वर र उहाँको वचन को सामुन्ने खडा हुन को लागी उभिएको छ।
अब जोन देख्छन्: "पवित्र शहर, नयाँ यरूशलेम, भगवान बाट स्वर्ग बाट तल आउँदैछ, एक पति को लागी एक पति को लागी सजिएको दुलही को रूप मा तैयार।" र फेरि येशू ख्रीष्ट बाट आवाज "यो सकियो।" र तब जोन चर्च, नयाँ यरूशलेम, स्पष्ट रूप मा, र पूरा विवरण मा देखाइन्छ।
नयाँ यरूशलेम चर्च भित्र, जोन सिंहासन र थुमा, र जीवन को पानी को नदी शहर बाट बाहिर देख्छ। अब यूहन्ना लाई प्रकाश को यो पुस्तक छाप नगर्न भनिएको छ। "र आत्मा र दुलही भन्छन्, आउनुहोस्। र उसलाई सुन्नेले भनोस्, आउनुहोस्। र उसलाई जो तिर्खाएको छ आओस्। र जो कोहि चाहन्छ, उसले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनको पानी लिन दिनुहोस्। ” अन्तमा हामी गम्भीरता संग जोडिएको छ वा यस पुस्तक बाट टाढा लिन चेतावनी दिइएको छ, वा त्यहाँ एक अनन्त परिणाम हुनेछ!